Kitra – «Ligue des champions d’Europe»: handray ny Real Madrid ny Atalanta | NewsMada
Kitra – «Ligue des champions d’Europe»: handray ny Real Madrid ny Atalanta
Hifarana anio alarobia ny lalao mandroso hiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa, taranja baolina kitra “Ligue des champions”. Fihaonana roa no voalahatra amin’izany ka anisan’ireo ny fampiantranoan’ny Atalanta Bergame Italia ny Real Madrid. Voalohany eo amin’ny fifaninanana ofisialy ny fifandonan’ny roa tonta. Raha tsiahivina, nivoaka ho mpandresy hatrany ny Real, tamin’ireo lalao dimy nikatrohany tamin’ny ekipa italianina. Fandresena azon’izy ireo tany Italia avokoa izany. Raha ara-taratasy aloha, manantombo ny Real Madrid ary betsaka ireo maka azy ho mpandresy amin’ity fihaonana voalohany ity. Na izany aza, tsy ekipa kely akory ny Atalanta fa efa tonga teo amin’ny ampahefa-dalana, tamin’ny taom-pilalaovana lasa.
Anisan’ny mampiavaka ity ekipa Italianina ity, izy irery no ekipa tsy nahazo fandresena tao amin’ny kianja filalaovany tamin’ny fifanintsanana isam-bondrona nefa tafita amin’ny ampahavalon-dalana. Ady sahala roa sy faharesena iray ny vokatra azony, tamin’izany.
Ankoatra izay, hanafika ny Monchengladbach ny Manchester City. Ekipa diso mifankahala tsara ny roa tonta, izay impito amin’izao no hifandona eo amin’ny sehatra eoropeanina. Tsy mbola naharesy ity ekipa anglisy ity ny Monchengladbach, teo amin’ny “Ligue des champions”. Fandresena telo sy ady sahala iray ny fihaonana teo amin’izy ireo. Tombanan’ny rehetra hanantombo ny Manchester City, izay mbola handray ny lalao miverina.